တန်ဆောင်တိုင်…တောင်ကြီးမှာ | Layma's World
« ရေထဲက … မြို့စိတ် …. စွပ်ပြုတ် (၂) »
nu-san, on November 27, 2007 at 9:45 am said:
အမလည်း တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် အရမ်းသွားချင်တာပဲ.. ဓာတ်ပုံတွေပဲ ကြည့်နေရတယ်.. အင်း.. “ပန်းရောင် အနွေးအကျီင်္ကိုထပ် … လည်ပင်းမှာ မာဖလာပတ်… နားရွက်လုံတဲ့ သိုးမွှေးဦးထုပ်ကိုဆောင်း…ခြေအိတ်စွပ်…ဖိနပ်စီး…” ဒီလို မျိုး ၀တ်ထားတဲ့ လေးမကို မျက်စိထဲ မြင်အောင်ကြည့်တာ ပန်းရောင်ပဲ မြင်ရတယ်.. 😀 တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို မျှဝေပေးတဲ့ လေးမကို ကျေးဇူး.. 🙂
kothwe, on November 27, 2007 at 11:54 am said:
ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလုပ်နေတာ ညိမ်းညိုဆိုတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပေါ့ဗျာ။ အမအိမ်က ကောင်လေးတွေတင်မကပါဘူး။ ပိစိညှောက်တောက် ကလေးလေးတွေကအစ ခေါ်လာခွင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအစ
ညိမ်းညိုကို ခွေးလို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ခွေးပါလို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးသမုတ်ထားလိုက်တော့ တခြားသူတွေက အကြိမ်တစ်သိန်းလောက်ခေါ်နေလည်း
စိတ်သက်သာတာပေါ့ဗျာ 🙂 မရင့်ကျက်သေးတော့ ဒီလိုပဲ ကြံဖန်ပြီး ကုစား ရတာပေါ့ဗျာ ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ 🙂 တန်ဆောင်တိုင် ဓာတ်ပုံများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။
tzm, on November 27, 2007 at 1:23 pm said:
တန်ဆောင်တိုင်ပုံလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူး.. မမလေးရေ
စာရေးတဲ့ပုံစံ မိုက်တယ်ဗျာ.. 😀
လေယာဉ်နဲ့သွားတာကိုး.. ကားနဲ့က ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ် မမလေးရဲ့။
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖူးသေးတယ်…။ နောက်နှစ်တော့ ရောက်အောင်သွားဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်…။
မိုးချစ်သူ, on November 27, 2007 at 3:37 pm said:
နှမငေးကို ကျ မခေါ်တွားဘူး။
တိလား။ တူလေး တူမလေးတွေနဲ့လေ။
တွားမယ်နော်။ ချစ်မ Aja Aja Fighting!!! 😛 😛 😛
သဉ္ဖာ, on November 27, 2007 at 3:38 pm said:
Anonymous, on November 28, 2007 at 12:07 am said:
လာလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လေးမတို့ပြမှပဲ မြင်ရတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဒီမှာသူများတန်ဆောင်တိုင်ပဲ ငေးနေရတဲ့နှစ်တွေကများနေပြီ
Better Tomorrow, on November 28, 2007 at 12:09 am said:
ဟဲဟဲ ကွန်မန့်တစ်ခါမှ မချန်ထားခဲ့ဘူးတော့ နာမည်ထည့်ဖို့မေ့သွားတယ်။ ဘွာတေး ဘွာတေး အပေါ်ကအစ်ကိုရေးတာနော်။
မျှားပြာ, on November 28, 2007 at 3:29 am said:
“ ပင်စိမ်းသီးပိုးထိုး …တောင်ကြီးသူကို ရအောင်ပိုး …”
ပင်စိမ်းသီးပိုးထိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ .. လိုတဲ့အခါ သုံးရအောင်ပါ
ဟတ်ဟတ် ဟတ်။ ပျော်စရာကြီးပေါ့နော် .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ကြောင်မျိုး, on November 28, 2007 at 7:56 am said:
မြေပြန့် သူလေးနဲ့ တောင်ပေါ်သား အစ်ကိုကြီးတို့ စုံတွဲ ကို တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲ တော်မှာ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်မိတယ်…ပျော်စရာကြီးနော်…တောင်ကြီး သူလေးတွေ ချောတယ်ဟုတ်…တီလေးး….
နှင်းဆီနီနီ, on November 28, 2007 at 8:02 am said:
တောင်ကြီးက ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စားချင်လိုက်တာ။
chaos, on November 29, 2007 at 1:18 pm said:
ပန်ဒိုရာ, on November 29, 2007 at 3:37 pm said:
ဟေး ဓာတ်ပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ
winkabar, on November 30, 2007 at 2:09 am said:
အစ်မရေးထားတာ ပျော်စရာကြီးပဲ။ သွားတောင်သွားချင်လာပြီ။အစ်မပုံကောမရိုက်လာဘူးလား။ အပန်းရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့လှနေမှာပေါ့နော်။
layma, on November 30, 2007 at 1:33 pm said:
>ma nu-san… ဟုတ်တယ်..မ…ပန်းရောင်ပဲမြင်ရမှာ..။
>kothwe … ပျော်ရွှင်ပါစေ…။ အစ်မ အိမ်က ကောင်တွေက နာမည်မခေါ်တတ်ဘူး…။
>tzm … စာရေးတဲ့ပုံစံ မိုက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး…။ ကားစီးရတာ ခါးညောင်းတယ်…။ အစ်မက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မဟုတ်တော့ ကားအကြာကြီး မစီးချင်ပါ..။ ပျင်းတယ်…။
>moechitthu …တိတယ်..ပေါက်တယ်..တွားမယ်… ။
>thinzar … ညီမလေးက ခုဘယ်မှာလဲ..။
>better tomorrow …ကိုသူပုန်ကြီး ထူးထူးခြားခြား မှတ်ချက်လေးနဲ့ငေးသွားတာကျေးဇူး..။
>bluearrow … ပင်စိမ်းသီးပိုးထိုးအောင် ပိုးတောထဲထားလိုက်…။ ပျော်စရာကြီးလို့တော့ ထင်ရတာပဲလေ..။
>mgmyo … တောင်ကြီးသူချောမချောတော့ သိဘူး…။ တောင်ကြီးသားတော့ ချောမှန်းသိတယ်…။ 😛
>rose … ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၀ယ်ကျွေးမယ်…။ ကျသွားတဲ့ အားတွေ လည်းပြန်ပေးမယ်…။
>chaos …ဂယ်ပြောတာလား… ဖွလိုက်မှာနော် … သိချင်နေတဲ့ သူတွေကို ပြောပြလိုက်မှာနော်…။
>ma pan …မပန် ..ရိုက်တဲ့သူကလည်း…အဟဲ..ဟဲ…။
>winkabar … အပန်းလေးနဲ့ သိပ်လှတာပေါ့ ( အကျီင်္လေးက)…။
ချစ်လေပြေ, on November 30, 2007 at 5:48 pm said:
လေးမရေ အမလဲ တောင်းကြီး တန်ဆောင်တိုင်ကို သွားချင်လို့ အားခဲထားတာ၊ ရောက်ကို မရောက်နိုင်ဘူး၊ ဘယ်တော့များမှ ရောက်မလဲမသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် တောင်ပေါ်သူ ဖြစ်သွားတဲ့ လေးမကိုပဲ ကပ်ရမလားမသိ၊ ဟိဟိ ဓာတ်ပုံလေးတွေက လှတယ်၊
ulmuka, on December 4, 2007 at 6:37 pm said:
အစ်မရေ ။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် ဓါတ်ပုံတွေအတွက်ကော ၊ အင်းလေး ဓါတ်ပုံတွေ အတွက်ရော ကျေးဇူးဗျာ။ ကျွန်တော် ဒီနှစ်တောင်ကြီးမပြန် လိုက်ရဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေက လှမှလှ။
layma, on December 6, 2007 at 10:39 am said:
>မမလေပြေ … ဟဲ..ဟဲ…ကပ်ထား…လေးမကို ကပ်ထား…။
>ကိုဇီးကွက်…. တောင်ကြီးသားလား…။ မပြန်ရဘူးဆိုတော့ သနားပါတယ်…။
geminingelay, on December 13, 2007 at 11:21 am said:
I was so happy that i forgot to take photos